ANTBIS Stations dugwọ Mbido na Ọrụ Otu | RayHaber
HomeTurkeyMediterranean Region07 AntalyaANTBIS Stations dugwọ oge na usoro otu
ANTBIS Stations dugwọ oge na usoro otu
07 / 11 / 2019 07 Antalya, Mediterranean Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey
antisi ọdụ tarifụ na azụmahịa otu
Ndokwa nke ANTBİS Stations na ndi otu a: Antalya Metropolitan Obodo, iji kwalite iji ihe eji eme ugbo ala dika nnabata njem na ihe egwuregwu; ANTBIS bu n’ịbawanye Bisiklet Smart Bike Sharing System inde Antalya, si otu a na-eweta ezigbo ahụike na gburugburu ebe obibi maka ndị hụrụ igwe na-agba ọ bicycleụ n'anya.
Site na sistemụ igwe kwụ otu ebe Smart Bike, ndị hụrụ igwe kwụ otu ebe agaghị ebu ha igwe, ha nwere ike ịgbazite igwe kwụ ọtọ site na ọdụ ANBİS ma hapụ ha n'ụlọ ọrụ ANTBİS ọ bụla.
Gịnị bụ Smart Bike Sistem?
Ọ bụ usoro ịnagide igwe kwụ otu ebe na-arụ ọrụ dịka ụzọ ọzọ eji ebugharị ụgbọ elu maka ndị hụrụ igwe mmadụ n'anya n'ọtụtụ obodo ukwu, na-ewepụ ịdị mkpa nke iburu anyịnya igwe site na ịkwado ya na teknụzụ teknụzụ, enwere ike itinye ya na netwọ ụgbọ njem n'obodo ahụ.
Ebumnuche nke usoro a bụ ịgba mbọ hụ na enwere ike ije njem ogologo nke 3 - 5 km na-enweghị ịkwọ ụgbọala. N'ụzọ dị otu a, ibu belata na ebu njem ọha na eze na ikuku gas na-emebi gburugburu ebe obibi ga-belata ebe ọha mmadụ ga-enwe ohere iji ụgbọ njem ahụike na mmekọrịta dị mma na gburugburu ebe obibi.
Oge Ego ANTBIS
Ebe E Si Nweta Kaadị Ego £ 24
Cardgwọ Onye Ndenye aha £ 5
Usgwọ Kwa Oge
1 ese £ 1.5
2 ese £ 2.5
Maka Oge ọ bụla £ 2
Etu ị debanye aha na ANTBIS Smart Bicycle System?
Nwere ike ịme azụmahịa otu gị site na ANTBİS Member Center nke dị n'akụkụ ọdụ ụgbọ ala ANTBİS.
Ọ ga-abụrịrị na ị dị afọ 18 iji bụrụ onye otu nke sistemụ igwe kwụ otu ebe.
Must ga-enwerịrị kaadị njirimara mgbe ị na-achọ kaadị onye otu.
Ọnụ ego kaadị otu bụ 5 TL. Nwere ike ibugo na kaadị gị site na isi otu.
Etu aga esi zuta igwe na ANTBIS Stations
1. Site na ngwa eji eme ihe; Nwere ike bụrụ onye otu na ngwa ANTBIS, ị nwere ike ibunye nguzo na akaụntụ gị ma nwee ike ịgbazite site na paswọọdụ ị ga-enweta site na menu otu iji paswọọdụ.
Ka e nyefee gị igwe kwụ otu ebe; Pinye Tinye na igodo ozo n’akpata igwe. Tinye paswọọdụ otu oge pịa pịa ọzọ. You nwere ike iji ụda dabere bulie igwe kwụ otu ebe
2. Na Kaadị ndenye aha; Al nwere ike wepu kaadị gị na ntinye aka na Antbis Subscriber Center ma nwee ike ịgbazite ụgwọ site na kredit. (EKWU EGO KIOSK NA AKWARDKWỌ AKW BYKWỌ AKW BYKWỌ)
Ka e nyefee gị igwe kwụ otu ebe; Gbanye kaadị gị na ihuenyo ahụ igodo na-esote igwe kwụ otu ebe. Tinye paswọọdụ gị wee pịa Tinye. You nwere ike iji ụda dabere bulie igwe kwụ otu ebe.
3. Iji kaadị akwụmụgwọ; 24 TL ga-egbochi gị igwe kwụ otu ebe ma ị jiri kaadị kiosk na-akwụ ụgwọ. Mgbe ị na-ebugharị ma jiri igwe kwụ otu ebe gị, a ga-akwụ gị ego iji kwekọọ elekere ị na-eji na ego a egbochi, a ga-ahapụ ego fọdụrụnụ na kaadị gị na 23.30 n'abalị na-esote. N'ihi sistemụ arụmọrụ nke ụlọ akụ, oge igbochi dị iche n'etiti ụbọchị 1 na 30.
Ka e nyefee gị igwe kwụ otu ebe; Pinye Tinye na igodo ozo n’akpata igwe. Pinye okwuntughe gi na Antbis ma pịa Tinye ọzọ. You nwere ike iji ụda dabere bulie igwe kwụ otu ebe.
4. Ejiri kaadi ya; You nwere ike ịmepụta akaụntụ otu Antbis site na menu mgbazinye igwe kwụ otu ebe na kaadị kaadị 18 ahaziri aha gị. You nwere ike nyefee ego na kaadị obodo gị na akaụntụ antbis gị ma gbazite paswọọdụ naanị iji.
Site na ngwa 1-ANTBIS ngwa ekwentị
Pịa na menu Member ma banye. (Ọ bụrụ n’ichetaghị nkọwa gị, biko pịnye na echefuru m paswọọdụ m. M ga-eziga ntinye gị site na SMS)
Nwere ike ibugo si na Ebe E Si Nweta Kaadị - Ibu Ibe Ego Nri.
Site na 2-Kiosk
Pịa na Wụnye Ebe E Si Nweta menu ma họrọ onye debanyere aha ya.
Gbanye kaadị gị ma kwuo n'ihu na igodo ya na paswọọdụ kaadị gị ma metụ ya aka ọzọ.
Ozugbo ị nyochachara ozi akaụntụ gị, ịnwere ike ibugo na nchịkọta nhọrọ Ebe E Si Nweta bulite ọzọ.
Anyị ANTBIS Smart Bike System na-arụ ọrụ ugbu a na ọdụ isii.
Ọdụ ụgbọ Boğaçayı (na-abụghị Akdeniz Blv. Ebe obibi Erdoğan)
Ogige Konyaaltı (nke ozo megidere Akdeniz Blv. Hilmi Kokoreç)
Ọdụ Olbia (Dumlupinar Blv. Olbia Square Mpaghara)
Ọdụ ụgbọ mmiri dị iche iche (Ogige Beach Park Konyaalti Beach Malite)
Ọdụ Ogige Atatürk (Konyaaltı Cad. Na-esote Atatürk Park)
Gbanyụọ ọdụ ụgbọ okporo ụzọ (Milli Egemenlik Cad. Emechiri emechiri ọnụ ụzọ - N'ihu Halk Bank)
Ọdụ şıklar (Genclik Mah. Fevzi Cakmak Street Karaalioglu Park Entrance)
Stationlọ Ọrụ Mgbanwe Sampi (Metin Kasapo Cadlu Cad. Beytaş Sit. Front nke ABC Blocks)
Ogige Düden Park (Çağlayan Mah. Shelters Blv. Düden Park Entrance - N'ihu Ngalaba Ọkụ)
Map nke ANTBIS
Accessbanye na map ANTBIS ebe a Pịa ebe a!
SME Stations eegwọ usoro ụgwọ na usoro ndị otu
Steti KAYBİS, Usoro Ego na usoro ndi otu
GAZİBİS Stations dugwọ usoro andgwọ na ndị otu
Nextbike Konya Smart Bicycle Stations Fee…
Oge ihe nlere nke BISIM na ndi otu
Usoro Marmaray nke Marmaray Stations na…
IMM na-ekwuputa ụgwọ nha ọhụụ maka ationgbọ njem
Nightlọ Egwuregwu Istanbul Night Metro Fee
Oge Konya Map Na Konya Tram Times…
Ndokwa nke Kayseri Tram Stram na Tram
Fgwọ Ọrụ ablegwọ ğgbọ Ese na Bursağ
Gịnị bụ Smart Bike Sistem
ANTBİS İstasyonlarından Nasıl Bisiklet Alınır
ANTBİS ücret tarifesi
ANTBİS Akıllı Bisiklet Sistemine Nasıl Abone Olunur
ANTBİS Üye İşlemleri
ANTBİS Sistemine Nasıl Abone Olunur